१० वर्षमा आमिर खानको कति फिल्म फ्लप ? - TodayKhabar
१० वर्षमा आमिर खानको कति फिल्म फ्लप ?
काठमान्डौ : अभिनेता आमिर खान बलिउडमा सफल कलाकार मानिन्छन । यिनले अभिनय गर्ने फिल्मले दर्शकको मन जित्दै आएका छन् । चाहे पिके होस् या दंगल आमीरलाई दर्शकले मात्र हैन क्रिटिक्सले पनि तारिफ गर्दै आएका छन् । यिनै आमीरको एक दशमा तीन फिल्म फ्लप भएका छन् ।
आमिरले १० वर्षमा नौ फिल्ममा अभिनय गरेका थिए, जसमा तीन फिल्म धोबिघाट, तलास र ठग्स अफ हिन्दोस्तान फ्लप भए । यी फिल्मले लगानीको तुलनामा केही मुनाफासमेत कमाए । तर, पनि फिल्मलाई बक्स अफिसमा फ्लप नै मानियो ।
काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञा अझ खुकुलो: व्यापार व्यवसाय खुला, यातायातमा जोरबिजोर यथावत
भारतको उत्तर प्रदेश (बराणसी) मा सांसद चन्दा चौधरी सम्मानित
कुश्वाहामाथि हातपात तथा दुर्व्यवहार गर्ने जनमत पार्टीका धनुषा अध्यक्षसहित १७ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइँदै
भारतको कारोना संक्रमणबाट मृत्युहुनेको संख्या उच्चः मृतकको संख्या ५१ हजार भन्दा बढी पुगे
उपत्यकामा बढ्यो कोरोनाको जोखिम, एकैदिन ५३ जनामा संक्रमण पुष्टि